Induction Fanele ny kofehy vita amin'ny kofehy
Home / Applications / Induction Annealing / Fanamafisana ny tariby varahina
Sokajy: Induction Annealing Tags: tariby varahina, fanalefahana, copper wire, annealing tariby varahina, fantsona varahina varahina avo lenta, varahina manenona varahina, induction fanangonana varahina varahina, drazana
Induction fanasitranana vy sy kofehy volafotsy
Ny tanjona dia ny hanafoanana ny tady ho an'ny famokarana preform.
Fitaovana varahina Nickel Silver 2774 tsorakazo firaka 0.070 ″ (1.8mm) savaivony.
500 kHz matetika
Fitaovana • Rafitra fanamoriana fampidirana DW-UHF-6KW-III miaraka amina workhead lavitra miaraka amina capacitor 1.0 μF, ary 4-20 mA mpandray fifehezana manampy amin'ny famolahana herinaratra.
Fomba fanodinana coil helika miavaka misy coil efatra misesy mifandraika amin'ny tadin'ny fantsom-pitrandrahana quartz no ampiasaina hanamafisana ny tariby mankany 650ºF (343.3ºC) amin'ny fampidirana annealing.
• Farimbona kokoa ny vokatra 27 '(8.2m) isa-minitra
• Fampihenana ny oxidation et scaling